Avengers: ခေတ် Ultron မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Avengers: Ultron ၏ခေတ်
LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel စတူဒီယိုရဲ့ The Vision?
20 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 192 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Mark Tranter ပါ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, အဆိုပါ LEGO Group, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, WandaVision
Lego 71031 Marvel စတူဒီယိုများသည်သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသော The Vision ၏ဗားရှင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့်ဤတွင်ဖြစ်သည်
LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel စတူဒီယိုရဲ့ The Scarlet Witch?
19 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 222 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Agatha Harkness, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Baron Strucker, Captain America နှင့် Winter Soldier, Captain America: ပြည်တွင်းစစ်ကြီး, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, မွေခှေး, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, Pietro Maximoff, Quicksilver, Scarlet စုန်းမ, ဝမ် Maximoff, WandaVision, X-Men
အသစ်ထွက်ရှိလာသော LEGO 71031 Marvel စတူဒီယိုများတွင် The Scarlet Witch ၏အထင်ရှားဆုံးဗားရှင်းပါ ၀ င်သည်
အားလုံးသစ်ကို LEGO Marvel ယနေ့ဝယ်ယူရန်ရရှိနိုင်အစုံ
01 / 06 / 2021 27 / 05 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 215 Views စာ0မှတ်ချက် 76178 နေ့စဉ် Bugle, 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76193 အဆိုပါ Benatar, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, သံမဏိလူသား, Lego, LEGO Group, Lego မှ marvel, LEGO.com, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, အဆိုပါ LEGO Group
LEGO အသစ်ခုနစ်ခုစလုံးကိုရှာဖွေပါ Marvel ဒီကနေဝယ်ဖို့ရရှိနိုင်အစုံ။ ဆောင်ပုဒ်မှနွေရာသီဖြည့်စွက်
LEGO ကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ Marvel 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off
30 / 05 / 2021 30 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 263 Views စာ0မှတ်ချက် 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity Saga, Avengers: The Infinity Saga, Captain America, Hydra, Hydra အေးဂျင့်, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, superhero, အဆိုပါ Infinity Saga
နောက်ထပ် Lego Marvel Infinity Saga အစုံကိုမဖြန့်ချီမီကရှာဖွေခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနှင့်အနီးဆုံးပုံကိုပေးခဲ့သည်
19 / 05 / 2021 19 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 923 Views စာ0မှတ်ချက် 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76193 အဆိုပါ Benatar, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Avengers, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Black က Panther, Captain America, Groot, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, mantissa, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ဒုံးပျံ raccoon, Scarlet စုန်းမ, Shuri, စတား-သခင်ဘုရား, နွေရာသီ, နွေရာသီ 2021, Thanos, Thor
LEGO ၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ် Marvel 76193 အဆိုပါ Benatar
13 / 05 / 2021 13 / 05 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 811 Views စာ0မှတ်ချက် 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76193 အဆိုပါ Benatar, Avengers, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, Black က Panther, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 2, Infinity Saga, သံမဏိလူသား, Lego, LEGO Group, Lego မှ marvel, LEGO.com, Marvel, စျေးဝယ်, အဆိုပါ Infinity Saga, အဆိုပါ LEGO Group
အခြား Lego ၏ပထမပုံရိပ် Marvelနွေရာသီအစုံ ၇၆၁၉၃ Benatar ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် Marvel ပရိသတ်တွေအသိအမှတ်ပြုပါလိမ့်မယ်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောင်သော LEGO Thanos bigfig
13 / 05 / 2021 13 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 970 Views စာ0မှတ်ချက် 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, Black က Panther, Infinity Saga, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Thanos
ဒီနွေရာသီရဲ့ Lego Marvel အစုံလိုက်များသည် LEGO စူပါဟီးရိုး Pantheon တွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပေးခဲ့ခြင်းအားဖြင့်မှားယွင်းခဲ့သည်
Lego Marvel Infinity Saga နွေရာသီ 2021 အစုံဖော်ပြခဲ့သည်
13 / 05 / 2021 13 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 1616 Views စာ0မှတ်ချက် 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, Black က Panther, Infinity Saga, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, အဆိုပါ Infinity Saga
တစ် ဦး ကဗြိတိန် department စတိုးဆိုင် st ရှိပါတယ်artငါးယခင်က - ထုတ်ဖော် LEGO ရောင်း ed Marvel နွေရာသီ 2021 အစုံ, အတွက်သော့ချက်အချိန်လေးပြန်လည်လည်ပတ်
အဆိုပါ LEGO Group LEGO Universe တေးသံကိုပြန်လည်ပြုပြင်သည်
24 / 02 / 2021 24 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 515 Views စာ0မှတ်ချက် Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Bits N 'အုတ်, ဘရိုင်ယန် tyler, Iron Man 3, Lego, Lego iverseာ, Marvel, ပက်ထရစ် Stewart, podcast တခုကို, Richard Dekkard ပါ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ
အဆိုပါ LEGO Group တေးဂီတကို၎င်း၏ ၂၀၁၀ အစုလိုက်အပြုံလိုက် - multiplayer online game LEGO Universe သို့ remastered - ၎င်းကိုရရှိနိုင်သည်